Fandraisana - Wikimedia Commons
Wikimedia multilingual project main page in Malagasy
Tonga soa eto amin'ny Wikimedia Commons
fametrahan-drakitra miisa 74 409 386 rakitra media azo ampiasaina ary azon'ny tsirairay fenoina.
Fikarohan-drakitra eto amin'ny Commons
Ny pejy fandraisan'ny Wikimedia Commons amin'ny fiteny hafa :
Sarin’ity andro ity
Sarin'ity andro ity
+/− [mg], +/− [en]
Topaka RSS · Alefa imailaka · Sarin'ity andro ity efa lasa
Median'ity andro ity
Média du jour
+/− (fr), +/− (en)
Des difficultés pour lire ce fichier ?
Topaka RSS · Median'ity andro ity efa lasa
Mitety ve ianao ?
Andramo ny motera fikarohan-tsary, eo ambonin'ity pejy ity. Misoratana anarana ampahalalahana eo amin'ny flux de syndication.
Mampiasa ve ianao ?
Mba hameno ny adidinao momban'ny lisansa malalaka, vakio ny toromarikay eo amin'ny réutilisation de contenu hors de Wikimedia (fampiasana votoaty malalaka any ivelan'i Wikimedia). Afaka mangataka sarisary koa ianao.
Mamantatra ve ianao ?
Andana tetezo ny Sokajy:Unidentified subjects (lohahevitra tsy fantatra). Raha mahita zavatra fantatrareo ato, Mandraisa naoty eo amin'ny pejin-dresak'ilay rakitra.
Mamorona ve ianao ?
Jereo izay mety ilainao eo amin'ny toromarika Mandray anjara amin'ny alàlan'ny asanao.
Rehefa hikaroka momban'ny fomba hafa fandraisana anjara eto amin'ity tetikasa ity, vangio ny Toerana iraisana.
Fanomezan-tsary avy any amin’ny firaketana mineralin’i Robert Lavinsky
Nanomezan'i Robert Lavinsky sary avy amin'ny firaketany mineraly ny Wikimedia Commons (29 000 eo ho eo), ary sary rehetra avy amin'ny tranonkalany, irocks.com. Nanome sary hafa miisa roa alina avy amin'ny tahiriny koa ny tetikasa Commons.
Mila fanampiana izahay ho an'ny fandikana tenin'ny famisavisan'ireo sary rehetra nomeny, ho an'ny verification raha tsy misy adino ny sary avy eo amin'ny tranonkala irock.com, ary ho an'ny fampidirana azy eto amin'ny Commons raha izany. Azonao jerena ny antsipirihany momban'ny fomba fanampianan anay.
Le Tropenmuseumdia nanome antsika sary 35 000 momban’ Indonezia. Mila ny fanampianao izahay mba hisokajy ireo sary ireo. Azonao vakiana eto hoe amin'ny fomba ahoana izahay no mety ampianao.
Raha vao voalohany ianao no mitety an'i Commons, azonao atomboka amin'ny sary tena tsara, ny sary tsara ary sary sarobidy, nofidian'ny fikambanana ny fitetezanao. Azonao tetezina koa ny galerian'ny mpandray anjara mahay : jereo ny sarin'ny mpaka sarinay ary ny mpanao sarisary.
Foto-tsokajy · Sokajy
Araka ny lohahevitra
Fossiles · Météo · Paysages · Plantes · Règne animal · Vie marine
Société · Culture
Alimentation · Art · Blasons · Croyances · Drapeaux · Évènements · Histoire · Langues · Littérature · Lieux · Musique · Objets · Personnages · Politique · Spectacles · Sports
Astronomie · Biologie · Chimie · Mathématiques · Médecine · Physique · Technologie
Architecture · Chimique · Civile · Électrique · Environnementale · Géophysique · Mécanique · Procédés
Araka ny toerana
Océans · Îles · Archipels · Continents · Pays · Subdivisions
Astéroïdes · Comètes · Étoiles · Planètes · Galaxies · Satellites naturels
Araka ny karazana
Cartographie (Atlas) · Dessins · Diagrammes · Peintures · Photographies · Symboles
Discours · Musique · Prononciation · Wikipédia lu · Wikisource lu
Animations · Sinogrammes
Araka ny mpanao
Architectes · Compositeurs · Peintres · Photographes · Sculpteurs
Araka ny lisansa
« Creative Commons » · Documentation libre GNU · Domaine public
Araka ny fiaviana
Encyclopédies · Revues · Publié par l’auteur
Tetikasa miaraka :
Wikimedia Commons bénéficie du soutien de la Wikimedia Foundation qui
héberge sur ses serveurs plusieurs autres projets wiki libres, multilingues et gratuits.
Encyclopédie libre Wikinews
Actualités libres Wikivoyage
Guide de voyage libre Wikiversité
Dictionnaire universel Wikiquote
Recueil de citations Wikisource
Bibliothèque universelle Wikilivres
Ensemble de textes pédagogiques
Inventaire du vivant Wikidata
Base de données libre Meta-Wiki
Coordination de tous les projets MediaWiki
Développement du logiciel Wiki
Retrieved from "https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Fandraisana&oldid=314474358"
Last edited on 12 August 2018, at 06:14
This page was last edited on 12 August 2018, at 06:14.